Forum serasera malagasy fihetsika kely amin'ny andavanandro manena ny fandaniana herinaratra - Dinika forum.serasera.org
fihetsika kely amin'ny andavanandro manena ny fandaniana herinaratra
Fitohizan'ny hafatra : fihetsika kely amin'ny andavanandro manena ny fandaniana herinaratra
mimima - 25/07/2018 18:18
Moa ve fantantsika fa ny fomba fanaon-tsika sy ireo fihetsika isika andavanandro sasany dia azo ovaina mba hiarovana ny tontolo iainana sady mampihena ny vola mivoka amin-tsika.
Ohatra: "ny appareil en veille" dia mbola mihinana herinaratra toy ny fahita lavitra,ny ojam-peo,ny "chaine wifi".Raha toa ka mbola mandeha izy ireny dia mandany eo amin'ny 100W isan'ora eo no eo ary raha avela"en veille" dia misy fandaniana eo amin'ny 20W isan'ora eo no eo.Isika anefa dia manajanona azy ireny ho "en veille" indrindra rehefa @ alina na koa @ atoandro na dia tsy ampiasaina aza.
Raha atao ny kajy madinika dia ny famelana ny fitaovana "en veille" dia mbola mandany herinaratra kokoa.
Fihetsika kely andavanandro ihany anefa dia ampy hampiena ny fandanian-tsika ny herinaratra toy ny hoe fanesorana avy hatrany ireo fitaovana @ fitohizan'ny herinaratra rehefa tsy ampiasaina.
Izany dia hampiena ny vidin'ny herinaratra ary indrindra koa manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
VoaraRaz - 25/07/2018 18:36
Marina tokoa izany voalazanao izany fa tena mampiena ny fandaniana ny famonoana tanteraka ny fitaovana rehetra rehefa tsy ampiasaina izy ireny.
Misy koa ny fahazarantsika tsy manapika jiro rehefa mifindra efitra, izany koa anefa dia fietsika kely izay adinotsika nefa mety ampiena ihany koa ny vola lany amin'ny vidinjiro, ary mety hanampy ihany koa amin'ny fitsinjovana ny tontolo iainana.
Fa ankoatra ny jiro dia hita koa fa misy fahazarandratsy hananatsika izay tokony ovaina koa momba ny fampiasana rano. Ohatra amin'izany, Matetika isika dia mamela ny rano handeha rehefa miboroso nify. Ny famonoana an'io anefa mampiena ny rano lany ary tsy mahavery fahatany ny rano.
Fihetsika kely andavanandro izany nefa dia misy fiantraikany lehibe eo @tontolo hiainana satria dia efa miaritra ny rano amin'izao.